बी.पी.– कम्युनिष्ट नेता, वार्ता र त्यो भेट « नेपालबहस
बी.पी.– कम्युनिष्ट नेता, वार्ता र त्यो भेट
सम्झनामा बीपी कोइराला:
प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०७८, बुधबार १३:३०
मिति : २०३६ साल असार (सायद) २ गते शनिबार । स्थान : बीपी निवास, जयबागेश्वरी (गौशाला) काठमाडौँ । समय : बिहान करिब साढे नौ बजे । बिदाको दिन परेकोले पशुपतिनाथ दर्शनपछि बीपीसँग भेट र कुरा सुन्न हामी विद्यार्थीहरू उहाँको निवासमा पुग्छौँ ।
जनमत संग्रह घोषणापछिको माहोल छ । बीपीको देश दौडाका कुरा चलिरहेका छन् । मानिसहरू धेरै रहेछन् । घाम चर्किन थालेकोले विहानै गर्मीको महसुस भइरहेको छ । सबैलाई चिन्न सकिएन र बीपीले भनेका सबै कुरा टिप्न सकिएन । बीपीको लागि सेतो सफा खोल लगाइएको एउटा मात्र बेतको कुर्सी राखिएको छ । प्रतीक्षामा २०-२५ जनाको जमघट आँगनमा छ ।
बीपी भित्रबाट निस्कनु भयो, र भन्नुभयो ‘एति नै हो भने भित्रै आउनुहोस्’ । सँगसँगै भीमबहादुर तामाङ र शिवध्वज बस्नेत पनि छन् । प्रांगणको सामुहिक भेटघाट भुईंतलाको कोठामा भयो । उहाँ बस्नेबित्तिकै काँचको गिलासमा तातोपानी दिइयो । पानीको गिलास बोकेर बीपी बोल्न थाल्नुभयो ।
‘के छ हालखबर ?’ बीपीको प्रश्न र विसञ्चो, ‘आज मलाई त्यति आराम छैन, ज्वरांश र रुघाखोकी छ । तपाईँहरूलाई देखेपछिमात्र उठेर आएको ।’
जमघटको बीचबाट प्रा. विदुर पौडेल बोल्छन्, ‘मलाई कताकता दरबारिया र कम्युनिष्ट मिलेर यो जनमत संग्रह हुन दिँदैनन् जस्तो लाग्दैछ ।हिजो यहाँ कम्युनिष्टका केही नेताहरूसँग सान्दाजुको भेटघाट र कुराकानी पनि भयो अरे । त्यस बारेमा हामीलाई जान्ने कौतुहलता छ ।’
‘के कौतुहलता छ ? प्रश्न सोध्ने काम विदुरको ।’ बीपीको प्रत्युत्तर ।
विदुर : ‘गणेशमानजीले जनमत संग्रह निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित गर्ने भए पञ्चायतका निकायहरूको विघटन, राष्ट्रिय सरकारको गठन आदि ५ वटा शर्त भनिसक्नु भएको छ । कम्युनिष्टहरू त्यसैलाई उछालेर हिँडिरहेका छन् । अर्काथरि कम्युनिष्टहरू निर्दल रोज्छस् कि बहुदल रोज्छस् भनेर जनमत संग्रह गराउनु भनेको माटो खान्छस् कि घाँस खान्छस् भनेर रोजाएको हो, हामी केही पनि रोज्दैनौँ भनेर सक्रिय बहिष्कारको घोषणा गरिसके । यस्तो बेलामा हामीले कसरी जाँदा उचित हुन्छ ?’
बीपी : यो जनमत संग्रहलाई हेर्ने विभिन्न दृष्टिकोण छन् । त्यो स्वाभाविक लाग्छ मलाई । जनमत संग्रह कसरी आयो ? दुईटा कुरा, यसले राजा पनि केही न केही दबाबमा छन् भन्ने देखाइसक्यो, अर्को पञ्चायत उनैलाई बोझ भइसक्यो, यसलाई कसरी सम्मानजनक रुपले बिसाउने, सेफ ल्याण्डिङ् भन्नेमा मनोविज्ञान बनिसक्यो । पञ्चायतको आन्तरिक पतनको क्रमले राजालाई पनि एउटा सम्मानजनक बाटो लिनुपर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
म पहिले गणेशमानजीका कुरामा जान्छु । उहाँ पञ्चायत र पञ्चको सरकारप्रति आक्रामक तवरले आउनु भएको छ । उहाँले त्यस्तो कुरा गर्दा हाम्रै मान्छेहरूको तालीको पर्रा…..। म यसमा हाम्रै लागि अवसर देखिरहेको छु । रिफरेन्डम गराउने कामका लागि राजा आफ्ना बचनमा बाँधिइसके । दुनिया साक्षी छ । उनलाई प्रजातन्त्रवादीको सहयोग चाहिन्छ ।
त्यो बेला उनले गणेशमानजीको स्पिरिटको प्रतिकूल हुने गरी मसँग यसो गर्नुप¥यो भन्लान् । दरबारभित्रका अतिवादीको चंगुलमा राजा नफसुन् भनेर मैले ‘कुरा त्यति नराम्रो त होइन, तर यस कुरामा मैले सबभन्दा पहिले गणेशमानजीलाई मनाउनुपर्छ, यसो भयो भने गणेशमानजी पनि मान्नु हुन्छ, हाम्रो पार्टीलाई पनि स्वीकार्न सजिलो हुन्छ’ भनेर उनको मुठी खुलाउन सहज हुनेछ । गणेशमानजीको कुराले केही बिग्रेको छैन, एक प्रकारले ठीक छ ।
अच्छा, अब कम्युनिष्टहरूले बहिस्कार गरेको कुरामा, उनीहरूको कुराले दरबारभित्रकै अतिवादीलाई हौस्याएर राजालाई उनीहरू भन्न पुग्लान्, ‘देखिबक्सियो, यिनलाई जति दिए पनि मन बुझ्दैन । यो त साँपलाई दूध पिलाउने काम जस्तो हुन्छ । राजतन्त्र जनमतले टिक्दैन शक्तिले टिक्छ ।’ यस्ता कुरा गरेर राजालाई उदारवादी बाटोबाट अतिवादी बाटोमै फर्काउने काम हुनथाल्यो भने अहिले देखिएको आशा पनि हराउँछ । बहिस्कारको कुराले देखाइसक्यो, अतिवादीहरूलाई डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज गर्नु नै छैन । गणेशमानजीका कुरा र कम्युनिष्टरूको बहिस्कारको भेद यस अर्थमा बुझ्नुपर्छ ।’
शेरबहादुर देउपा (त्यो बेला देउवालाई ‘देउपा’ भनिन्थ्यो) : ‘कम्युनिस्टहरूसँग के कुरा भयो हिजो ?’ छातीमाथि हात थन्क्याएर एक छेउमा उभिरहेका देउपा बोले, ‘कम्युनिस्टहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुने सम्भावना छ सान्दाजु ?’
बीपी : हो, उनीहरूसँग मेरो भेट भयो । कुराकानीहरू भए । बहिस्कारवादीहरू त थिएनन् सायद । मनमोहन थिए । सहाना थिईन्, पुष्पलालकी वाईफ । मेरो उनीहरूलाई जवाफ थियो, तपाईहरूसँग (जनमत संग्रहमा) एकसाथ जान दुईटा कुरामा पहिले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
पहिलो तपाईँहरू एउटा पार्टीको वर्गीय अधिनायकवादी शासन स्थापना गर्ने चेष्टामा लाग्नुभएको हो । राजाप्रति मेरो विरोध किन भन्दा उनी अधिनायकवादी भए भनेर नै हो भने एउटा अधिनायकसँग नमिल्नेले तपाईँहरूको अधिनायक हुने महत्वाकांक्षालाई स्वीकार्नु प्रजातन्त्रको संघर्षमा के महत्व हुन्छ । अर्को कुरा तपाईँहरूको नजरमा हामी लिखित रुपका मूख्य दुश्मन । मूख्य दुश्मन भन्ने, मिलेर जानुपर्छ भन्न पनि आउने, यो विरोधाभासले मिसलिड् गर्छ, म यस्तोमा सामेल छैन ।
अर्को कुरा तपाईँहरूले यहाँ गरेका कुराहरू, निर्णय पालन सबैबाट हुने कुरामा कसरी कसले ग्यारेन्टी दिन सक्छ । एकथरि छन् ती त । यो जनमत संग्रह नै धोका हो भन्छन् । तिनले यी कुरा आफ्नो गतिविधिको कहाँ राखेर लैजान्छन् ?
यम शर्मा पौडेल : हामीले कम्युनिस्टलाई पनि लिएर गएनौँ र राजासँग पनि सुमधुर सम्बन्ध भएन भने हामी आईसोलेसनमा पर्न सकिन्छ कि सान्दाजु ?
बीपी : अच्छा ! तिमीले सोधेको यो प्रश्न बारम्बार आईरहन सक्छ । हामीले आफ्नो शासनको लागि, भनौं न पार्टीतन्त्रको लागि मात्र कसैसँग मिल्ने कुरा हुँदैन । मेरो मूल सरोकार प्रजातन्त्रसँग छ । जनतालाई कसरी अधिकार र स्वतन्त्रता दिने, कसरी आत्मनिर्भरताको बाटो दिन सकिन्छ त्यो भन्नेमा छ । पार्टीहरूभित्र प्रजातन्त्रका भेल्युहरू सुसज्जित भएनन् भने त्यस्तो प्रजातन्त्र अभिशाप हुनसक्छ ।
तेसैले मैले भन्ने गरेको हामीले जनतालाई राजनीतिक र आर्थिक न्याय दिने खालको राष्ट्रियताको मजबुतीकरण गर्ने खालको प्रजातन्त्रमा कम्युनिस्टहरू आउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? प्रजातन्त्रबिनाको पार्टी शासन त कम्युनिस्टहरूले पनि खोजेकै छन् । तर मेरो खोजी त्यसभित्र साँचो प्रजातन्त्र हो । जनतालाई डेलिभर गर्ने खालको प्रजातन्त्र हो । ‘मोडेल डेमोक्रेसी’ भन्छु नि म, फलदायी प्रजातन्त्र । – चन्द्रमणि गौतमको अभिलेखबाट